घर अफ्रिकी फुटबल स्टोरीहरू क्यामेरोनियन फुटबल खेलाडीहरू Youssoufa Moukoko बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्य
हाम्रो Youssoufa Moukoko को जीवनी तपाईंलाई आफ्नो बचपन कहानी, प्रारम्भिक जीवन, आमा बुबा, परिवार, प्रेमिका / पत्नी हुनु जीवन शैली र व्यक्तिगत जीवनको बारे तथ्यहरू बताउँछ।
संक्षेपमा हामी तपाईलाई उनको जीवनको शुरुवातदेखि नै उनको जीवनको प्रस्तुति दिन्छौं, जब उनी प्रसिद्ध भए। तपाईको आत्मकथा भूखलाई छेड्न, यहाँ ग्यालरी बढ्नको शुरुका दिनहरू हो - यूसुफा मोउकोको बायोको एक सारांश।
Youssoufa Moukoko जीवन कहानी।
एक उत्कट फुटबल प्रेमी को रूप मा, तपाईंले सायद यो समयमा उनको नाम सुन्न सुरु गर्नुभयो बोरुसिया डार्टमन्ड आश्चर्यचकित BVB को U17 र U19 स्तरमा गोल स्कोरिंग रेकर्ड चकनाचूर। हुनसक्छ त्यस समयमा तपाईले उहाँसंग तुलना गर्न थाल्नु भयो सी रोनाल्डो। प्रशंसकको बावजुद, केवल केहि प्रशंसकहरु लाई उनको जीवनको इतिहास थाहा छ, जुन धेरै आकर्षक छ। थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
Youssoufa Moukoko बचपन कहानी:
जीवनी शुरुवातीहरूको लागि, उहाँ उपनाम लिनुहुन्छ, कोको। यूसुफा मउकोको जन्म नोभेम्बर २०० 20 को २० औं दिनमा उनकी आमा मेरी मोकोको र उनका बुबा जोसेफ मउकोको क्यामरुनको राजधानी याउन्डेमा भएको थियो।
अफ्रिकी जन्मे जर्मन फुटबलर आफ्नो आणविक परिवारका चार बच्चाहरू मध्ये एक हुन् - आफ्ना आमा बुबाको बीच मिलनबाट जन्मेका। यूसुफा मोउकोको बुबा र आमा - जोसेफ र मेरी फ्रान्सका होइनन्, तर पश्चिमी अफ्रिकी महानगर (याउन्डिक) को शुद्ध मूल निवासी हुन् जसले उपनाम पाएका छन्। सातवटा पहाडहरू भएको शहर.
गोल-स्कोरि machine मेशिनले आफ्नो जीवनको पहिलो दश वर्षहरू बढेर मायालु फुटबॉल याउन्डोमा आफ्नो जन्मस्थानमा बितायो। पछि, उसको हजुरबा हजुरआमा, आमा र जेठो दाइ, (बोरेल) सबैले उनलाई एक युवा फुटबल प्रतिभामा टुसाएको देखे। यूसुफा मोउकोको परिवारका सदस्यहरूले उनको कौशलता हेरे, तिनीहरूले खेलमा उनको ठूलो भविष्यको आशाको कदर गरे।
Youssoufa मउकोको परिवार पृष्ठभूमि:
हामीले यहाँ बताउनु पर्छ कि परिवारका रोटी खाने नोकर र घरका बाबु - जोसेफ १ 1900 ०० को दशकदेखि जर्मनीमा नागरिकको रूपमा बस्दै आएका छन्। भगवानलाई धन्यवाद दिनुहोस् उहाँ डेडबीट बाबा हुनुहुन्नथ्यो।
वास्तवमा, Youssoufa Moukoko आमा बुबा (जोसेफ र मारी) परिवार व्यवस्थापन मा धेरै दूरदर्शी थिए। त्यतिखेर, मौकोको बुबाले अक्सर परिवारको पालनपोषणको लागि उनको आमालाई युरो पठाउन्थे, यो विकासले मोउकोकोलाई याउन्डेमा प्राय जसो बच्चाहरूको जस्तै मध्यम-वर्गको पालनपोषण गर्न सहयोग पुर्‍यायो।
Youssoufa Moukoko परिवार मूल:
जे भए पनि कोको मध्य अफ्रिकी मुलुकमा जन्मेका थिए, तर अचम्मका कुरा जर्मन नागरिक हुन्। के तपाईंलाई थाहा छ?… उसको बुवा यूसुफले उनको जन्म क्यामरूनस्थित जर्मन दूतावासमा लगत्तै दर्ता गरे।
यद्यपि उहाँ अफ्रिकाले आफ्नो फिजियोगेमी र फिजिकमा सबै लेखेका छ किनकि उहाँ मातृभूमिबाट १००% हुनुहुन्छ। युसुफा मोउकोको बुबाआमा दुबै क्यामरूनका मूल निवासी हुन् र उनको परिवारको जरा भने गहन जरामा रहेको छ। याउन्डे फang्ग जातीयता.
Youssoufa Moukoko अनटोल्ड क्यारियर कहानी:
फुटबल उड्डयन ११ बर्षको उमेरसम्म उनका आमा बुबा बुबाले उनलाई जर्मनी पठाइदिने कुरामा सहमत भइसकेका थिए जहाँ उनले एफसी सेन्ट पाउलीको लागि खेल्न सुरु गरे। यसरी मोउकोको क्यारियर फुटबलमा यात्रा सुरु भयो। हेर, उहाँ एफसी सेन्ट पाउली आइपुगेपछि फुटबल प्रतिभा को एक दुर्लभ तस्वीर।
यो युसुफा मौकोको हो जब उनको बुवाले उनलाई युरोपमा लगेका थिए।
त्यहाँ अवतरण गर्दै, जवान शीर्ष गियरमा सरे। उनी तुरुन्तै क्लबको अण्डर १ side पक्षका लागि स्ट्यान्डआउट खेलाडी बने - ११ खेलमा ११ बर्षको उमेरका रूपमा २१ गोल ​​गर्दै! यस अविश्वसनीय प्रवृत्तिलाई अवलोकन गर्दै उनका बुबा, जोसेफले बरुसिया डार्टमन्डको लागि कदम चाले र यो उपलब्धिले उनको गोल स्कोर गर्ने सामर्थ्यको निरन्तरता देख्यो।
BVB मा प्रारम्भिक वर्षहरू:
तत्कालीन जवान बच्चा सायद १२ बर्षको भएको थियो जब उसले बीबीबीको अण्डर १ With टोलीको साथ डिफेन्स नष्ट गर्न र गोल मच्चाउन गोल गर्‍यो। नतिजाको रूपमा, उनले क्लबको U-12s मा पदोन्नति प्राप्त गर्‍यो किनकी उनी किशोरी हुनु भन्दा पहिले नै!
गोल स्कोरिंग फारमको उसको उत्कृष्ट रन प्रत्येक पदोन्नतीको साथ सुधार भएको देखिन्थ्यो, धेरै विकासमा श doubt्का गर्ने कि ऊ वास्तवमै १२ वर्ष पुरानो हो। किशोरावस्थाको उमेर छेउछाउका मुद्दाहरूको जवाफमा उनका बुबा जोसेफले एक बयान जारी गरे जुन जोड दिदै आएको छ:
"मेरो छोराको उमेर सही छ। उनको जन्म भएको लगत्तै मैले उसलाई याउन्डेको जर्मन वाणिज्य दूतावासमा दर्ता गरे। हामीसँग एउटा जर्मन जन्म प्रमाणपत्र छ। ”
त्यतिबेला १२-बर्षेको चेकआउट गर्नुहोस् जसको उमेर विवादको विषय भयो।
Youssoufa Moukoko जीवनी - प्रख्यात कथा को मार्ग:
जब याउन्डे मूल निवासी २०१ the-२०२० सिजनको सुरूमा U17s बाट U19s मा सर्न थाल्यो, त्यति उनलाई थाँहा थिएन कि उनी प्रख्यात हुने छेउमा थिए। त्यस तहमा, उनीसँग पहेंलो र कालो पोशाकमा प्रशिक्षकहरूको सर्वसम्मति समर्थन थियो।
अस्पष्ट बयानका साथ प्रेसलाई कष्ट दिने भनेर प्रख्यात रेटिकेंट प्रबन्धक लुसियन फाभ्रेलाई पनि प्रशंसकहरू मध्ये सबैभन्दा तातो मान्ने मोउकोकोलाई टिप्पणी गर्न सोध्दा सकारात्मक वाक्लो बन्न पुग्यो। बरूसिया डार्टमन्डको युवा समूहको अर्को ब्याच.
यहाँ तब १२-वर्षको उमेर छ जसको उमेर विवादको विषय भयो।
Youssoufa Moukoko बायो - ख्याति कथा माथि उठ्नुहोस्:
अण्डर १ B बुन्देस्लिगा र युईएफए युथ लीगले गोलका साथ प्रभुत्व पाएपछि कोकोले जनवरी २०२० मा BVB को पहिलो टीमसँग प्रशिक्षण सुरु गरे। महिना पछि नोभेम्बरमा उनले ort 19 औं मिनेटको विकल्पको रूपमा डार्टमन्डको लागि पदार्पण गरे। ईरलिंग ब्रुट हालान्ड हेरथा बीएससीको बिरूद्ध।
डेब्यूको साथ, मौकोको बुन्डेस्लिगाको लिग ईतिहासको सबैभन्दा कान्छो खेलाडी भयो। निस्सन्देह, शीर्ष उडान फुटबलमा उसको यात्रा भर्खरै सुरु भएको छ र त्यहाँ उसको लागि सकारात्मक हेडलाइन्सहरू छन्।
Youssoufa Moukoko आफ्नो लिग डेब्यू शुरू भएको क्षण हेर्नुहोस्।
जबकि Lifebogger.com ले कुनै पनि खेलाडीसँग तुलना गर्न सावधानी अपनाउन चाहन्छ लिओनेल मेस्सी, हामी विश्वास गर्दछौं कि मोउकोको एउटा अपवाद हो। मनपर्‍यो अन्डर ओन्नाना, उनी अचम्मै आफ्नै उम्मीदमा जिउँछन् र उनको टाउकोमा प्रशंसा हुन दिदैनन् वा आलोचनाले उनलाई असर गर्दैन। जुनसुकै तरिकाले चीजहरू उसको लागि झुकाव हुन्छ, बाँकी, तिनीहरू भन्छन् जस्तै उसको भिडियो हाइलाइट सहित, इतिहास हुनेछ।
Youssoufa Moukoko प्रेमिका को हो?
के अनुकूल सल्लाह को एक टुक्रा जस्तो देखिन्छ तर धेरै खराब छ? यसले एक किशोरीलाई भनिरहेको छ जो भर्खर १ turned वर्षको उमेरमा प्रेमिका पाउन कसले सही गर्छ? तपाईं, हो तपाईं! मउकोकोसँग वैग वा प्रेमिका छ कि छैन भनेर सोधपुछ गर्न धेरै चाँडो छ। ऊ फुटबलको लागि मात्र एक बच्चा हो। के तपाईं आफ्नो क्यारियर सुरु हुनुभन्दा अघि नै उसलाई अस्पष्ट बनाउँन चाहनुहुन्छ?
मानौं १ 16 बर्षे उमेरको एक प्रेमिका छ। तपाईं उसका छोरा वा छोरीहरू हुनुहुन्छ कि भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ? के हामी सबैले केटाहरूलाई केही सास फेर्ने ठाउँ दिन सक्छौं? धन्यबाद, र कृपया यो स्पेसलाई अपडेटका लागि जाँच गर्नुहोस् जब ऊ १ 18 वर्षको हुन्छ।
त्यहाँ प्रेमिकाको लागि कुनै ठाउँ छैन, कुर्सीमा पनि छैन।
Youssoufa मउकोको पारिवारिक जीवन:
हास्य प्रेमीहरूलाई विश्वास गर्न यो सजिलो छ कि स्ट्राइकर एक महिलाको जन्म थिएन। वास्तवमा कसै-कसैको विचारमा उहाँ सुपरम्यान जस्ता विदेशी ग्रहबाट पृथ्वी आइपुगेको छ र उहाँ धर्मपुत्री हुनुहुन्छ। तर हामी यहाँ राम्ररी सुचित छौं। यो खण्डले तपाईंलाई Youssoufa Moukoko अभिभावकको बारेमा थप तथ्यहरू ल्याउँछ। यति मात्र, उनका भाइबहिनीहरू र आफन्तहरूको बारेमा।
Youssoufa Moukoko अभिभावकको बारेमा:
हामी विश्वास गर्छौं कि अब तपाई मेरी र जोसेफसँग परिचित हुनुहुन्छ। बाइबली रूपमा होईन, तर जीवनी रूपमा तिनीहरू युसुफा मौकोको अभिभावक हुन्। जहाँसम्म हामी भन्न सक्दछौं, मेरीले २ 28 बर्षको उमेरमा जब उनले अगाडिलाई जन्म दिइन्। उनी हामबर्गमा बस्नका लागि आफ्नो पतिसँग सहमत हुनु अघि यी केटीले मायालु फुटबल खेलेको देखेकी थिइन।
अर्कोतर्फ, Youssoufa Moukoko बुबा, जोसेफ, एक पूर्व फुटबलर हो। उनी लामो समयदेखि जर्मनीमा चान्सलरको पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य हुन आएका थिए। जब मोउकोको उमेर छलफलको विषय बने, उनले छिटो-छिटो टिप्पणी गरे कि किशोरी एक अंडरचेभिंग हो र यसै उमेरमा उसले आफूभन्दा राम्रो गरेकोमा जोड दिँदै।
Youssoufa Moukoko भाई बहिनीहरू को बारे मा:
क्यामेरोनियामा जन्मेका फुटबलरका कथित रूपमा चार भाई बहिनीहरू छन्, तर हामी केवल एक जनालाई चिन्छौं। उहाँ मोउकोको जेरो भाइ, बोरेल हुनुहुन्छ। यो भाई फुटबलमा पनि छ र २०१ and देखि जर्मन क्लब श्वार्ज-वेइ एसेनको लागि खेलिरहेको छ।
Youssoufa Moukoko नातेदारहरूको बारेमा:
क्यामेरोनियनको निकट पारिवारिक जीवनबाट टाढा, उसको पुर्खाको रेकर्डहरू छैन। हाम्रा सम्माननीय पाठकहरू जस्तै हामी पनि यो जान्न उत्सुक छौं कि कोको आमा र बुवा हजुरआमा फुटबल प्रतिभाशाली थिए कि थिएनन्।
के उनका काका र काकीहरू खेल प्रेम गर्छन्? त्यसोभए ऊसँग चचेरो भाईले बनाएको छालहरू कतै हुनुपर्दछ, हैन? हुनसक्छ हो वा होईन। त्यहाँ धेरै उत्सुकताहरू छन् जुन हामी सन्तुष्ट पार्न चाहन्छौं, यद्यपि हामी उनलाई भतिजा र भतिजी चिन्न चाँडो छैनौं।
Youssoufa Moukoko व्यक्तिगत जीवन:
को हुनुहुन्छ जसले मान्छेलाई टू-टू-पृथ्वी र उद्देश्यपरकको रूपमा प्रहार गर्दछ, उसको टाउकोमा बकवास छ? हो, तपाईंले सही अनुमान गर्नुभयो, मउकोको! उहाँ एक स्वतन्त्र उत्साहित व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले फोटोहरू राख्नु सहित प्रेमको साथ सबै गर्नुहुन्छ।
यद्यपि BVB ले उनलाई धेरै मिडियाको ध्यानबाट जोगाउन धेरै प्रयत्न गरेको छ, तर उनको चरित्र र भावनात्मक बुद्धिमताले उनलाई एक सय साक्षात्कार भन्दा राम्रो बोलेको छ। नौजवानले चाँडो डु boats्गामा पौडी खेल्न र पौडी खेल्ने आनन्द लिन्छन्। उसको शौकहरूको सूचीमा परिवार र साथीहरूसँग समय बिताउनु हो। ऊ अचम्मको युवा प्रतिभा होइन?
के तपाईं उसलाई उसको कुनै एक रुचिमा संलग्न रहेको भेट्टाउन सक्नुहुन्छ?
Youssoufa Moukoko जीवनशैली:
१ocking क्लक गर्दै मात्र कोकोलाई उनको लिग डेब्यू गर्न योग्य भएन। नयाँ युगले उसको जीवनशैलीमा धेरै प्रतिबन्ध हटायो। यसैले, उसले अब साना कार र मोटरबाइकहरूको लागि ड्राइभर अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सक्दछ - आधा रात सम्म शहर वरिपरि ड्राइभि driving सहित। उसले स्थानीय चुनावमा पनि आफ्नो मत दिन सक्छ र बैंकमा खाता खोल्न सक्छ।
किन बैंक खाता महत्त्वपूर्ण छ? उसको कुल सम्पत्ति 500०० हजार युरो छ र उसको द्रुत गतिमा बढ्दै गरेको आर्थिक भाग्यको ट्याबहरू राख्न आवश्यक छ। मौकोकोसँग नाइकेसँग उनको ठूलो आर्थिक भाग्यको लागि धन्यवादको सम्झौता छ किनकि यसले २ 250० हजार यूरोबाट आउने कमिहरू पूरा गर्दछ जुन BVB ले नोभेम्बर २०२० सम्म तिर्दछ।
त्यहाँ% 99% संभावनाहरू छन् कि मौकोकोसँग उसको नाममा अवतरण सम्पत्ति छैन। न त उनीसँग कार र घरहरू छन्। स्पष्टतः उनले सँगी फ्रान्सेली भाषा बोल्ने व्यक्तिले दिएको सल्लाहमा ध्यान दिएका थिए पियरे-एमिरिक एबम्हाङ, जसलाई उनले भेटेर भेट्टाए पछि Dortmund मा।
अब तपाईलाई थाहा छ कि उहाँ कसको पदचिन्ह पछ्याउनुहुन्छ।
Youssoufa Moukoko को बारे मा अनटल्ड तथ्यहरु:
कोकोको जीवनीको यस आकर्षक अंशलाई समेट्न, यहाँ उसको बारेमा थोरै-ज्ञात वा अनटल्ड तथ्यहरू छन्।
के तपाई सचेत हुनुहुन्छ?… जहाँ उनको परिवार (क्यामरून) बाट आएका छन्, औसत नागरिकले २ years बर्ष र months महिना काम गर्नुपर्नेछ मोउकोको (नोभेम्बर २०२०) डार्टमन्डमा वार्षिक वेतनमा।
प्रति वर्ष € 250,000
प्रति महिना € 20,833
प्रति हप्ता € 4,800
प्रति दिन € 686
प्रति घण्टा € 29
प्रति मिनेट € 0.48
प्रति सेकेन्ड € 0.008
तपाईंले युसुफा मउकोको हेर्न शुरू गर्नुभयोबायो, यो उसले कमाएको हो।
तथ्य # १ - जातिय भेदभावको शिकार:
अक्सर, विपक्षी फ्यानहरू निराश हुन्छन् उनीहरूको बिरूद्धमा धेरै गोल गर्ने तरिकाहरूबाट। अण्डर १ youth युथ म्याचमा सल्चके बिरुद्द, प्रशंसकहरूले युवालाई निराश पार्ने नाममा सबै जातिय भेदभाव प्रस्तुत गरे। धन्यबाद, मउकोकोले ह्याट्रिक लगाएर जवाफ दिए जसले तिनीहरूलाई चुप गरायो, र स्याचले खेल पछि माफी मागे.
तथ्य # १ - Youssoufa मउकोको धर्म:
यसले हाम्रो कल्पनालाई पिट्छ जसको बाबुआमाले इसाई नाम बोक्छन् कसैले इस्लाम धर्मको अभ्यास गर्छ। सायद त्यहाँ कुनै आश्चर्यको कारण छैन किनकि उसको पहिलो नाम युसूफा युसुफको एक संस्करण हो, हैन?
फिफाले अझै Youssoufa Moukoko लाई आधिकारिक रूपमा मूल्या rate्कन गर्न सकेको छैन। उहाँसँग के 72२ अ and्कको अनुकूलित रेटिंग हो र अन्दाज गर्नुहोस्?… उसको 92 २ को सम्भावित रेटिंग दुई अंक माथि छ शमूएल इटोको उच्च फिफा रेटिंग। हामी आशा गर्दछौं कि फिफाले सम्भाव्यता कायम राख्दछ र समग्रमा बढावा दिन्छ जुन प्रोकसियस केटको लागि फिट धेरै मानिन्छ।
हामी विश्वास गर्दछौं कि अगाडि राम्रो दिनहरू छन्। तिम्रो के छ?
Youssoufa Moukoko को जीवनी र बाल्यकाल कहानी मा यो टुक्रा पढ्न को लागी धन्यवाद। हामी आशा गर्दछौं कि यसले तपाईंलाई यो कुरा विश्वास गर्न प्रेरित गर्‍यो कि महानता उमेर-विशेष हुँदैन, जस्तै मोकोकोको फार्मको दौड प्रमाणित छ। सत्य यो हो कि पौराणिक कथा मनपर्दछ रिगाबर्ट गीत उनको लागि अदम्य सिंहहरूको लागि खेल्न खुशी छ - र आफ्नो राष्ट्रिय सपनाहरु छाडेर उनी गए।
यसबाहेक, अब हामी युसुफा मोउकोकोका आमा बुबाको प्रशंसा गर्न चाहन्छौं किनकि उनको उमेर आलोचकहरू भन्दा उसको पक्षमा मात्र नभई उहाँ अझ राम्रो प्रदर्शन गर्न आग्रह गर्दछौं। उसको उमेरको रक्षा गर्नु सामान्य हो, तर ह्याट-ट्रिकको साथ जातिवादलाई जवाफ दिने उहाँ एक बकबक फुटबलर हो देखाउँदछ।
Lifebogger मा, हामी सटीकता र निष्पक्षता संग बचपन कथाहरू र जीवनी तथ्या deliver्क वितरित मा गर्व गर्दछौं। यदि तपाईले केहि थाहा पाउनुभयो जुन ठीक लाग्दैन भने, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। अन्यथा, हामीलाई टिप्पणी खण्डमा तपाइँको बारेमा के सोच्नुहुन्छ बताउनुहोस्। हाम्रो विकी तालिकाले तपाईंलाई युसूफा मोउकोकोको बायोको सारांश लिन मद्दत गर्दछ।
पूर्ण नामहरू: Youssoufa Moukoko।
उमेर: 16 वर्ष।
जन्म मिति: नोभेम्बर १ 20 2004 XNUMXth को सातौं दिन।
जन्मस्थान: याउन्डो, क्यामरूनको राजधानी।
सेमी मा उचाई: १179 C सेमी
खेल्ने स्थिति: अगाडि
अभिभावक: मारी (आमा), जोसेफ (बुबा)।
Siblings: बोरेल (जेठो दाइ)
रुचि: गति बोटहरूमा सवारी गर्दै, पौडी खेल्ने, परिवार र साथीहरूसँग गुणस्तरको समय खर्च गर्दै।
नेट मूल्य: 500 हजार यूरो